Idaacad Muqdisho ku taala oo ku hor kuftay anshaxa Saxaafadda (Maxaa sababay?)
Mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho oo lagu magacaabo RADIO SHABELLE ayaa bilaabay dagaal saxaafadeed ka dhan ah Dowladda Turkiga, kuna tilmaamay inay tahay Dowlad dalka Soomaaliya ka wadda gumeysi, dhac, howlo sirdoon iyo iwm.
Dagaalka Warbaahinta ee Radio Shabelle uu ku qaaday Dowladda Turkiga iyo Hay'adaheeda ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka oo soo bilowday maalintii shalay ma ahayn mid loo qaateen ah lana dhihi karo haba yaraatee wax baa ka jira, hase yeeshee idaacadda ayayba ka sheegeen dagaalkooda waxa uu ku saleysan yahay.
Sida ka muuqata warsaxaafadeed ka soo baxay maamulka Radio Shabelle ayaa lagu sheegay in biro ay sureen wadada ku dhow xarunta idaacadda ay dhulka la simeen baalayaal iyo gawaari ay hay'adda Turkiga ah ee lagu magacaabo TIKA, kuwaasi oo maalmahaanba howlo lagu ballaarinayo waddooyinka Muqdisho isla markaana lagu hagaajinayo magaalada Muqdisho.
Ilaalada xarunta Radio Shabelle oo ku taalla agagaarka garoonka diyaaradaha Muqdisho ayaa isku dayay inay dhaqdhaqaaq dagaal-doon ah sameeyaan, hase yeeshee markii ay arkeen ilaalada kale baalayaasha iyo shaqaalaha Turkiga iyo waliba gawaarida AMISOM oo laba ka mid ah la keenay goobta tabartoodu ka badin weysay inay gudaha u galaan xaruntooda.
Halkaas kama dhicin wax shaqaaqo ah, marka laga reebo hanjabaado iyo caga jugleyn ka soo yeertay maamulka iyo ilaalada Radio Shabelle oo ciil dartiis caro kala dul dhacay Dowladda Turkiga iyo howlaha samafal oo ay ka waddo Muqdisho.
Dadka magaalada Muqdisho ayaa si weyn ula yaabay aflagaadada iyo wararka been abuurka cadaanka ah iyo dacaayadaha laga sii deynayo Radio Shabelle oo mararka qaarkood aad moodeyso in idaacaddu ku taalo goob aanay dowladi ka jirin, tiiyoo xarunteedu dhabarka ku heyso xarunta hoggaanka socdaalka iyo jinsiyadaha.
Wararka ay baahisay Idaacadda Shabelle waxay dad badan oo reer Muqdisho ah isweydiiyeen su'aasha ah "Ma Shabelle ma maanta ayay qaldan tahay mise shalay ayay saxsaneyd?", hase yeeshee akhristow inkasta oo dacaayad laga sheegay idaacad FM ah oo 100-Mitir kaliya laga dhageysto aanay waxba u dhimi karin cilaaqaadka soo jireenka ah ee ka dhaxeeya Dowladda Turkiga iyo Soomaaliya, hadana tallaabadaasi waxay ceeb iyo lama arag taariikhda ku qormeysa u tahay shaqsiyaadka uu ugu horeeyo milkiilaha idaacadda Shabelle nin lagu magacaabo C/maalik.
Soomaalidu waxay tiraahdaa "Timirba laf baa ku jirta" way cadahay ujeedada ka dambeysa dacaayadda Radio Shabelle ee Dowladda Turkiga, hase yeeshee Milkiilaha caadeystay cabista dhiigga Weriyeyaasha iminka wuxuu door biday inuu qamaarkii ugu dambeeyay dhigto xarunta Idaacadiisa iyo inta qof ee ku dhex jirta ama ka howlgala Idaacadda kaddib markii ay Dowladda albaabada u laabto idaacadaasi.
Ma rabo inaan halkaan ka sheego san-dareertada uu C/Maalik ku helo Weriyeyaasha idaacadiisa ka howlgala ee u dhintay wadada mugdiga ah ee uu u jeexay idaacadda, isagoo ku hor kufay anshaxa Saxaafadda iyo warbaahinta madaxa bannaan isla markaasina ka dhigay xarun mooryaan saxaafadeed ay ka howlgasho.
Dhowaan ayay ahayd markii idaacadaasi ay dacaayado iyo warar been abuur ah ka faafisay Guddoomiyaha G/Banaadir, waxaana maalintii shalay ay hadana furtay dagaal ay u caddeysatay Dowladda Turkiga oo ku xumeyneyso wax kasta oo howlo ah ee ay ka wado magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka.
Mar aan la sheekeystay mid ka mid ah weriyeyaasha ka howlgala Radio Shabelle oo diiday inaan magaciisa soo xigto ayaa ii sheegay inay ku sugan yihiin xaaladii ugu darneyd isla markaana aanay bannaanka uga soo bixi karin xarunta Idaacadda, wuxuuna intaasi raaciyay in saacad kasta taleefoonada looga hanjabo, wuxuuna intaasi raaciyay inay iminka galeen xabsi guri.
Ugu dambeyntii ha waarto Saxaafadda xorta ah ee ka hanaqaaday wadanka Soomaaliya, waxayna weriyeyaasha ka howlgala Muqdisho ugu baaqeen dhammaanba hay'adaha u dooda xuquuqda Weriyeyaasha caalamka inay tallaabo sharciga warbaahinta caalamiga ah ku qaadaan milkiilaha qaab mooryaaneedka Saxaafadeed la soo baxay.
Weriyeyaasha Muqdisho waxay kaloo si buuxda u taageerayaan wax kasta oo dan u ah dalka iyo dadka, hase yeeshee waxay ku booriyeen weriyeyaasha fara ku tiriska ah ee hoyga ka dhigtay xarunta idaacadda Shabelle inay isaga soo baxaan, inta goori goor tahay oo aanay daadku ugu soo gelin xeyndaabka yar ee laga baahiyo wararka been abuurka ah, iska hor keenka bulshada, faafinta iyo buunbuuninta colaad dib ugu soo noqota Muqdisho, kahortagga danaha guud ee dadka iyo dalka.